🥇 ▷ Kuwani waa "bilaashka" Ciyaaraha PlayStation Plus ee Ogosto ✅
Tartan mustaqbal mustaqbal leh oo ka socda Sony iyo ciyaarta ugu fiican ee dunidu kubbadda cagta adduunka ayaa isugu yimaadda bisha bisadaha.
Sony Entertainment ayaa ku dhawaaqday cayaaraheeda “bilaashka ah” PlayStation Plus ciyaaraha bisha Ogosto. Sida la ogsoon yahay, waxaan ula jeednaa cayaaraha aad kala soo bixi kartaan adoo isticmaalaya bil kasta biilkaaga ah ee PS Plus.
Bishan bisadaha bisadaha, ma jiraan waxyaabo la yaab leh (oo ka duwan bishii hore). Cinwaanada imaan doona Sony console bishaan waa WipEout Omega Collection iyo Sniper Elite 4.
Uruurinta Omega ururinta
Daabacaadii dhameystiranaa ee tartankii mustaqbalka ee mustaqbalkii hore ee ‘Studio Studio Liverpool’ ayaa dib loo soo noqday, hadda ma ahan wax aan lacag aheyn. Haddii aad leedahay PS VR ama telefishinka 4K, waxaad ubaahnaan kartaa inaad sii wado akhrinta.
Isku darka WipEout 2048, WipEout HD iyo fidinta HD Fury ee hal xirmo oo la duubay, Wipeout Omega Collection waxay keenaysaa xawaaraha qulqulaya iyo shucuurta shucuurta xawaaraha ka soo horjeedka xaraashka PS4.
Waxay ordayaan saacadda iyo tartamayaasha kale si ay u qaataan guriga guuleystaha, iyagoo furaya tobaneeyo maraakiib ah marka ay ka sii gudbayaan 26 waddood. Tartanku wuxuu noqonayaa mid aad uga sii cadhaysnaa khadka tooska ah iyada oo sideed ciyaartoy ay ku ordayaan wareegyada xawaaraha sare. Haddii kale waxay aadi karaan hal qof oo ay weheliyaan saaxiibkiis sariirtiisa.
Kuwa raadinaya shucuur dheeri ah waxay sidoo kale la kulmi karaan ciyaarta oo dhan, oo ay ku jiraan dhammaan qaababka iyo raadadka ku saabsan PlayStation VR.
Gabadha saddexaad ee Mucaaradka ayaa laga yaabaa inaysan da ‘ahaan si wanaagsan u lahayn ka dib 3 sano oo la siidaayay, laakiin wali waa khibrad weyn.
Dib ugu laabso inta u dhaxaysa khadadka cadowga waxaadna ka shaqaysaa sidii aad uga adkaan lahayd ciidamadii Axis ee ku sugnaa Jasiiradda Talyaaniga. Sahaminta deegaanno waa weyn oo kala duwan oo ah wakiilka qarsoodiga ah oo meesha ka saar cadawga ka hor intaanay fulin bartilmaameedka sareeya ee yoolalka qiimaha sare leh
Adeegso iskudhafyada dabinnada iyo waxyaabaha qarxa, bey’adaha khatarta leh, la kulanka melee. Sidoo kale dabcan, qorigiisa uu aaminay, si uu ugu beero fowdada cadawga adag. Istaraatiijiyad dheeri ah, ku wad saaxiibka khadka tooska ah ee internetka si aad u toogtaan ujeedooyinka ololaha iskaashiga ama aad ku raaxeysatid hawlgallo iskaashi oo ka kooban laba illaa afar ciyaartoy iyo qaabab badan oo tartan badan oo ilaa 12 ka qaybgalayaal ah.
Labada kulanba waa la heli doonaa si looga soo dejiyo PlayStation Store inta u dhexeysa Ogosto 6 iyo Sebtember 2.
Ha iloobin in laga bilaabo Luulyo 5-da Luulyo ciyaarta mar dambe ma jiri doonto. Kuwani waa Detroit noqdaan Aadanaha iyo Horizon Chase Turbo, si aad u soo dejiso ama aad ugu darto koontadaada horayba.